MUQDISHO, Soomaaliya - War qoraal ah oo kasoo baxay Wasaaradda Xanaanadda Xoolaha ee xukuumadda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in dowladda Qadar loo ogolaaday inay dalka ka dhoof-sato duur-joota gaar ahaan Sagaarada.
Nuqul kamid ah war-saxaafadeed oo uu arkay warsidaha Garowe Online ayaa lagu cadeeyay in tiradda loo fasaxay Dooxa ay tahay 14 Xabo, inkasta oo aanan lagu xusin hadii ay tahay mid joogto ah.
Bayaanka ayaa intaas lagu daray in 14-ta xabo ee Sagaaradda ah la marsiiyey baaritaano caafimaad xili laga codsadey cid kasta oo ay quseyso arrintaan ay fududeyso dhoofintooda.
Warqadda ogolaanshaha oo uu ku saxiixnaa Agaasimaha Wasaaradda Maxamed Cumar Nuur laguma xusin ujeedada ka dambeysa arrintaan, oo kusoo beegmaysa xili Qadar lagu soo rogay xayiraad dhulka iyo cirka ah.
Dalalka Khaliijka ayaa kusoo rogay Qadar xiyraadda kadib markii ay kusoo eedeeyeen inay taageerto kooxaha argagaxisada iyo inay cilaaqaad toos ah la yeelatay Iiran iyaga oo shuruud ku xiray inay ka qaadaan.
Dowladda Soomaaliya ayaa dhaliilay mowqifka ay ka qaadatey khilaafka Khaliijka iyadda oo si cad ula safatey Qadar, taasi oo uu ka dambeeyo ninka ugu awooda dowladda Farmaajo ee Fahad Yaasiin.
Fahad Yaasiin oo ahaa Agaasimahihii Madaxtooyadda ayaa dhowaan loo magacaabay Taliye ku xigeenka koowaad ee Hay'adda NISA, isaga la rumeysan yahay inuu dhaqaalo xoogan ku bixiyay guushii Farmaajo ee 8-da Fabraayo.
Fahad Yasin ayaa la rumeysan yahay inuu kamid yahay shaqsiyaadka saameynta ku leh...